Budada Lemborexant - Soo-saare Warshada
/ Products / Supplement / Budada Lemborexant
Budada Lemborexant waa hypnotics loo isticmaalo in lagu daaweeyo bukaanada qaangaarka ah ee hurdo la'aanta oo lagu garto dhibaatooyinka hurdada bilawga ah iyo / ama dayactirka hurdada, waxay ka shaqeysaa hoos u dhigista dhaqdhaqaaqa maskaxda si ay u oggolaato hurdo.
Lemborexant Sifooyinka aasaasiga ah ee budada
Product Name Budada Lemborexant
Formula kelli C22H20F2N4O2
Miisaanka Nooca 410.422
Isku mid ahaanshaha (1R,2S)-2-[[(2,4-Dimethyl-5-pyrimidinyl)oxy]methyl]-2-(3-fluorophenyl)-N-(5-fluoro-2-pyridinyl)cyclopropanecarboxamide;
Imaanshaha Caddaan ilaa Cad-cad budo adag
Kaydinta iyo Isticmaalka 20°C, jawi aan firfircoonayn
waa maxay Lemborexant Powder
Budada Lemborexant waa hypnotics loo isticmaalo in lagu daaweeyo bukaanada qaangaarka ah ee hurdo la'aanta oo lagu garto dhibaatooyinka bilawga hurdada iyo / ama dayactirka hurdada, waxay u shaqeysaa iyadoo hoos u dhigaysa dhaqdhaqaaqa maskaxda hurdo loo ogolaado. Lemborexant waa sheeko cusub oo dual orexin reseptor antagonist, waxay ka tirsan tahay kooxda daawooyinka loo yaqaan habdhiska dhexe ee neerfayaasha (CNS) niyad-jabka, inta badan waxay ka muuqdaan qaabka "kiniiniga", oo lagu iibiyo magaca astaanta leh "Dayvigo".
Lemborexant Habka Waxqabadka Budada
Habka ficilka budada lemborexant ee daaweynta hurdo la'aanta ayaa loo maleynayaa in ay tahay iyada oo loo marayo ka soo horjeeda soo-dhoweynta orexin. Nidaamka calaamadaynta neuropeptide orexin wuxuu ku lug leeyahay hawlo badan oo nafsiyeed, oo ay ku jiraan xakamaynta hurdada/soo jeedka. Orexin-A iyo orexin-B waxay dhaqaajiyaan post-synaptic G-protein-ku-xidhan2 orexin-1 reseptors (OX1R) iyo orexin-2 reseptors (OX2R), kuwaas oo laga helo neurons-ka hypothalamus kaas oo mashruuc u leh nuklei badan oo xakameynaya. Soo-dhoweeye kastaa wuxuu wataa dhaqdhaqaaq yar oo kala duwan - kicinta OX1R waxay u muuqataa inay xakamayso bilawga dhaqdhaqaaqa indhaha ee degdega ah (REM), halka firfircoonida OX2R ay u muuqato inay xakameynayso hurdo aan REM ahayn. Nidaamka calaamadaynta neuropeptide orexin ayaa door ka ciyaara soo jeedka. Joojinta xidhitaanka soo-jeedinta neuropeptides orexin A iyo orexin B ee soo-dhoweeyayaasha orexin OX1R iyo OX2R ayaa loo maleynayaa inay xakameynayaan soo kicinta. Budada Lemborexant waxay ku xidhan tahay soo-dhoweeyayaasha orexin OX1R iyo OX2R waxayna u dhaqmaan sidii antagonist tartan leh oo saameyn xooggan ku leh OX2R *.
Waxaa la soo jeediyay in budada lemborexant ay ka faa'iidaysato habkan gaarka ah waxaa laga yaabaa inay la timaado waxyeelo yar marka loo eego daawooyinka caadiga ah ee lagu daweeyo hurdo la'aanta, sida: benzodiazepines. Waqtigan xaadirka ah, daawooyinka noocan oo kale ah ee loo isticmaalo daaweynta hurdo la'aanta waxaa ka mid ah benzodiazepines iyo "z-daawooyinka , "kaas oo ku shaqeeya GABA reseptor, antihistamines kuwaas oo carqaladeeya saameynta soo noqnoqda ee histamine, iyo trazodone, taas oo saameynteeda ku yeelata nidaamka serotonergic iyo reseptors histamine. Benzodiazepines waxay soo bandhigtaa awood sare oo si xun u isticmaalka iyo ku tiirsanaanta jireed iyo nafsiyeed. Iyadoo budada lemborexant ay weli tahay daroogo cusub, caddayntu waxay soo jeedinaysaa in budada lemborexant ay noqon karto ugu yaraan waxtar badan oo leh karti yar oo ku tiirsanaanta zolpidem, oo aan ahayn benzodiazepine GABA agonist. Budada Lemborexant waxay si wax ku ool ah u yaraynaysaa daahitaanka hurdada waxayna kordhisaa dayactirka marka la barbardhigo kantaroolka. Budada Lemborexant waxay u muuqataa inay waxtar badan tahay hagaajinta dayactirka hurdada marka loo eego zolpidem ee bukaanka hurdo la'aanta.
Lemborexant Faa'iidada Budada & Saamaynta Dhinacyada
Lemborexant 5 mg iyo 10 mg waxay wanaajiyeen bilawga hurdada iyo dayactirka hurdada 6 bilood si wanaagsanna waa loo dulqaatay. Daawaynta lemborexant waxay keentay koror aad u weyn marka loo eego gundhigga wakhtiga hurdada guud ahaan marka la barbar dhigo placebo iyo zolpidem labadaba. Hurdada REM ayaa si weyn u korodhay lemborexant marka loo eego gundhigga, iyo daahitaanka iyo hurdada REM ayaa si weyn hoos ugu dhacay asalka.
Hurdo maalmeed ama daal ayaa ku dhaca dadka qaarkood ee qaata budada Lemborexant. Dhibaatooyinka soo raaca waxay u badan tahay inay dhacaan haddii budada Lemborexant la qaato qiyaas sare, oo lagu daro kuwa kale ee Niyad-jabka CNS, ama ka dib habeen hurdo xumo.
Qiyaastii 1 ee 20 dadka qaata 5 mg ee Lemborexant Powder waxay la kulmaan hurdo maalmeed ama saameyno la mid ah, halka 1 ee 10 dadka qaata 10 mg ee Lemborexant Powder ay la kulmaan iyaga.
Waxaa jira hoos u dhac ku-tiirsanaan ah oo dheellitiran, xusuusta, iyo dareenka afarta saacadood ka dib qaadashada budada Lemborexant. Sidaa darteed, waa in la qaataa oo kaliya ka hor inta aanad seexan. Saamaynta dheelitirka iyo xusuusta ayaa kordhay haddii khamriga iyo Lemborexant Powder la wada qaato, tanina waa la niyad jabay.
Dhibaatooyinka aan caadiga ahayn ee budada Lemborexant waxaa ka mid ah:
▪ Saamaynta niyad-jabka ee CNS/naafo maalintii
Hurdo curyaan ah
Calaamadaha u eg Cataplexy
Dabeecadaha hurdada ee isku dhafan
▪ Niyad-jabka/fikirka is-dilka oo sii xumaanaya
Sideed U Qaadataa Lemborexant Powder
Qaado budada lemborexant hal mar habeenkii ka hor intaadan sariirta gelin oo aad 7saacadood oo kugu filan hurdo aad hesho waxay heli doontaa saamayn wanaagsan. Waxaa laga yaabaa inaad dhibaato kala kulanto hadalka ama dhaqdhaqaaqa markaad huruddo. Waxa laga yaabaa inay kugu qaadato wakhti dheer inaad kacdo, ku hadasho, ama dhaqaaqdo markaad toosto. Waxaa laga yaabaa inaad dareento inaad weli riyoonayso dhowr daqiiqo ka dib markaad toosto. Ha ku qaadan cunto ama wax yar ka dib, waxay qaadan doontaa waqti dheer si aad u shaqeyso. Dhanka kale, falcelintaada ayaa laga yaabaa inay daciifto subaxda ka dib markaad qaadato budada lemborexant. Ha wadin ama ha samayn wax kasta oo kaaga baahan inaad ka digtoonaato. Lulmo waxay sababi kartaa dhicis, shilal, ama dhaawacyo daran. Ha kordhin qiyaastaada adigoon la hadlin bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga marka hore. Wac bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga haddii hurdo la'aantaada (dhibaatada hurdo la'aanta) ay sii xumaato ama ay ku soo rayn waydo 7 ilaa 10 maalmood gudahood.
Maxay Daawadu Saameyn Doontaa Lemborexant Budada?
Isticmaalka lemborexant daawooyin kale oo kaa dhigaya hurdo ayaa ka sii dari kara saameyntan. Weydii dhakhtarkaaga ka hor intaadan isticmaalin daawada opioid, kaniiniga hurdada, nafisiyaha murqaha, ama daawada walaaca ama qalalka.
Mararka qaarkood maaha mid amaan ah in la isticmaalo dawooyinka qaarkood isku mar. Daawooyinka qaarkood waxay saameyn karaan heerarka dhiigga ee daroogooyinka kale ee aad qaadato, taas oo kordhin karta saameynada ama daawooyinka yareynaya.
Daawooyinka kale ayaa laga yaabaa inay saameeyaan lemborexant, oo ay ku jiraan daawooyinka rijeetada iyo kuwa aan farmashiyaha laga iibsan, fiitamiinnada, iyo alaabta dhirta. U sheeg dhakhtarkaaga dhammaan daawooyinkaaga hadda iyo dawo kasta oo aad bilowdo ama joojiso isticmaalka.
 2021 Dec 20. Daroogada iyo Xogta nuujinta (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): Maktabada Qaranka ee Daawada (US); 2006–. PMID: 33104322
. BMJ Furan. 2021 Nof 26;11 (11):e054885. doi: 10.1136/bmjopen-2021-054885.PMID: 34836909
 Regul Toxicol Pharmacol. 2021 Dis;127:105053. doi: 10.1016/j.yrtph.2021.105053. Epub 2021 Oct 4. PMID: 34619288
AASraw waa soo saaraha la aamini karo oo si sharci ah shatiga u haysta ee ugu sareeya Lemborexant Powder. Ku soo dhowow inaad naga dhigto amarka annaga!